Iplastiki yePlastiki engenanto engenanto, iPlastiki yePlastiki engenanto, Iibhokisi zePlastiki zokuPakisha - Ukuqhuba
Flame nekudodobalisa Sheet
Uvavanyo lwephepha le-ESD
I-PET / PVC
Ibhokisi PET / PVC
Ifilimu yePET / PVC
Isiselo kunye namanzi asebhotileni
Ulawulo lweR & D
Inkonzo ye-OEM Inkonzo yoYilo enikelweyo
Shandong Runping Plastic Co., Ltd yenye mveliso eliphezulu-zobugcisa PP zeplastiki sheet ezibuhlazarha (roll) kunye neebhokisi zeplastiki ukupakisha kunye ISO 9001: 2008 & RoHs ungqinisiso e Weifang komzi, kwiphondo Shandong, China.
Ukufakwa kwesandi kunye nobushushu
Ngenxa yolwakhiwo lomngxunya wephepha leplastiki, ubushushu bayo kunye neziphumo zokudlulisela isandi ziphantsi kakhulu kunephepha eliqinileyo. Inobushushu obushushu obufanelekileyo kunye nefuthe lesandi sokugquma.
Eyokuqala kukuba iindleko zezinto zeplastiki ezingenanto zingaphantsi kunezinye izinto. Iya konga kakhulu iindleko ezininzi ngexesha lokuthenga izinto ezingavuthiweyo kwiimveliso ezigqityiweyo.
Kubalulekile ukuba wazi ukuba izinto ezinobungozi kokusingqongileyo zixhalabile ngakumbi kwihlabathi liphela. Iphepha elingenanto le-PP alinetyhefu kwaye alingcolisi, kwaye linokuphinda lisetyenziswe kwakhona lisetyenziswe ukwenza ezinye iimveliso zeplastiki.
Umkhono wokukhusela umkhono
Ibhotile yeglasi yokusela yokupakisha
Uphawu lwentengiso lweplastiki
pp ibhodi Ulenze
Siyathemba ukuba uphuhliso lweshishini oluhle kunye nabo bonke abathengi! Wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu!
Ukuqalisa ukungenisa ngaphakathi i-PP ngokuzenzekelayo, ii-PE zenziwe ngamacwecwe emigca yokuvelisa imveliso ngoomatshini abaphambili kunabo bonke ekhaya, abasebenzisa uyilo olwahlukileyo lwesikere, ibhloko yokumisa ehlengahlengisiweyo kunye nenkqubo yolawulo lobushushu ekhethekileyo ukuqinisekisa ngokupheleleyo ukusebenza okuzinzileyo kweplastiki kunye nokusebenza kakuhle kwe-extrusion. Iiseti ezili-11 zokucheba okuthe ngqo kokuchaneka kunye nokwenza izixhobo zamkele ukucofa okuthe tyaba okuphambili kunye nomatshini wokusika wokufa, ukusebenzisa isixhobo sokufakelwa kweefoto ezikrelekrele ukuqinisekisa ubungakanani obuchanekileyo bokulungiswa kwephepha kunye nokuphucula umgangatho wokuqhubekeka ukuya kuthi ga ngoku. Ukulungiswa kwephepha kukwamkela izixhobo ze-welding eziphambili ze-ultrasonic, izixhobo zebhokisi yezikhonkwane kunye nezixhobo ezizenzekelayo zokubopha ubushushu, izixhobo zokuprinta ezizenzekelayo, izixhobo zokutywina ezizenzekelayo, izixhobo zokupakisha ezizenzekelayo, njl. Njl. ibhodi, kunye nemisebenzi ekhethekileyo ezifana ukuthotywa, anti-static, conductive, nelangatye nekudodobalisa kunye nokumelana ukwaluphala. Iziphumo zonyaka zinokufikelela ngaphezulu kweetoni ezingama-20,000.
Ikhonkco: www.rlimpast.cn webcpro.com
Kutheni ukhetha iphepha leplastikhi ukwenza uphawu?
Shandong ukubaleka Plastic Industrial Co., Ltd.
Ukusetyenziswa kweBhokisi engenanto yokuThengiswa kweBhodi kwiNtengiso yeMifuno
Iofisi yase China: NO.13887, indawo yeefektri yeifang, shandong, China
Iofisi yase-usa: eyona dilesi yeplast twinwall: 8605 santa monica blvd # 79525 west hollywood california 90069-4109 usa
Umnxeba: 0086 13355279991